China Potassium Bromide rụpụta na ụlọ ọrụ | Ntinye
Aha Bekee: Potassium Bromide
Okwu ndi ozo: Bromide Nnu nke Potassium, KBr
Usoro kemịkal: KBr
Molekụla arọ: 119.00
Ebe mgbaze: 734 ℃
Ebe esi: 1380 ℃
Solubility: soluble na mmiri
Njupụta: 2.75 g / cm
Ọdịdị: Igwe na-enweghị ntụ ma ọ bụ uzuzu ọcha
HS koodu: 28275100
Njirimara nke aru (Solid Potassium Bromide)
Mkpụrụ osisi: 119.01g / mol
Ọdịdị: ọcha kristal ntụ ntụ
Njupụta: 2.75g / cm3 (siri ike)
Ebe na-agbaze: 734 ℃ (1007K)
Ebe esi: 1435 ℃ (1708K)
Solubility n'ime mmiri: 53.5g / 100ml (0 ℃); Solubility bụ 102g / 100ml mmiri na 100 ℃
Ọdịdị: cubic crystal na-enweghị ntụpọ. Ọ bụ isi na-adịghị isi, nnu ma na-ilu ilu. Lee ìhè dị mfe edo edo, ntakịrị hygroscopicity.
Potassium bromide bu ihe anakpo ionic compound nke anakpochapuru ya ma obu onye ozo mgbe etisiri ya na mmiri.Common iji mee ion bromide - Silver bromide maka iji foto were meputa site na mmeghachi omume ndia di nkpa:
Bromide ion Br- na mmiri mmiri na-edozi mmiri nwere ike imepụta ogige na ụfọdụ ọla kọpa, dị ka:
Potassium Bromide nkọwa:
Nnwale (dị ka KBr)% ≥
Sulphate (dị ka SO4)% ≤
Chloride (dị ka Cl)% ≤
Iodide (dị ka m)% ≤
Bromate (dị ka BrO3)% ≤
Arọ arọ (dị ka Pb)% ≤
(Gwè (dị ka Fe)% ≤
Ntughari 5% na410nm
Deoxidize ahụmahụ (na KMnO4)
acha uhie uhie na-agbanweghi agbanwe n'elu ọkara awa
1) Electrolysis Usoro
Ga site na potassium bromide na potassium hydroxide synthesis na mmiri dechara iji gbasaa n'ime electrolyte, nke mbụ nke ngwaahịa crude, electrolytic mgbe 24 h mgbe ọ bụla 12 h na-ewe ntụ, a na-asacha ngwaahịa ahụ na-ekpochapu hydrolysis mgbe mwepụ nke KBR, tinye a obere ego nke potassium hydroxide ịgbanwe pH uru nke 8, mkpuchi nyo mgbe 0,5 h, ga-dokwuo anya na filtrate na crystallizer na ufọt ufọt jụrụ na ụlọ okpomọkụ, crystallization, nkewa, ihicha, potassium bromate e mere site ngwaahịa.
2) Chlorine ọxịdashọn Method
Mgbe mmeghachi omume nke mmiri ara ehi lime na bromide, agbakwunyere gas chlorine maka mmeghachi omume nke chlorine, na mmeghachi omume kwụsịrị mgbe pH uru ruru 6 ~ 7. Mgbe mwepụ slag gasịrị, a na-ekpochapu filtrate ahụ.Barium chloride solution na-emeghachi iji mepụta barium bromate ọdịda, na ẹdụk ọdịda na-kwụsịtụrụ na mmiri ịnọgide na-enwe a ụfọdụ okpomọkụ na-agbakwunye na potassium carbonate abụọ decomposition mmeghachi omume. A na-eji obere mmiri distilled na-asa crude potassium bromate ugboro ole na ole, wee kpochaa, kpochapu ya, mee ka ọ dị mma, kpochapụ ya, kewapụ ya, nke a mịrị amị ma gwerie ya iji kwadebe ngwaahịa potassium bromate.
3) Bromo-Potita Hydroxide Method
Site na bromine mmepụta ihe na potassium hydroxide dị ka akụrụngwa, a na-agbaze potassium hydroxide ka ọ bụrụ ihe ngwọta yana okpukpu 1.4 nke mmiri, ma tinye bromine n'okpuru mkpalite mgbe niile. Mgbe agbakwunye bromide na ọnụọgụ ụfọdụ, kristal ọcha na-apụ iji nweta potassium bromate crude.
Gaa n'ihu na-agbakwunye bromine ruo mgbe mmiri mmiri ahụ bụ pink. N'otu oge ahụ na-agbakwunye bromine, a na-agbakwunye mmiri oyi mgbe niile na ihe ngwọta iji gbochie ọnwụ nke bromine volatilization n'ihi oke okpomọkụ.Rerystallized ugboro ugboro, nzacha, mịrị, wee jiri mmiri deionized. ma gbakwunye obere potassium nke hydroxide iji wepu oke bromine n'oge njikọ, recrystallized once, mechara wepụta kristalization, kpọnwụrụ akpọnwụ, ngwaahịa agwụla.
1) Photosensitive ihe ụlọ ọrụ na-eji na imewe nke photosensitive film, Mmepụta, na-adịghị mma ndim n'ụlọnga, toner na agba foto bleaching gị n'ụlọnga;
2) Ejiri dị ka nhụjuanya akwara na ọgwụ (mbadamba bromine atọ);
3) Ejiri maka ihe nyocha nke kemịkal, ihe ntanetị na ntinye infrared, na-eme ncha pụrụ iche, yana ederede, lithography na akụkụ ndị ọzọ;
4) A na-ejikwa ya dị ka ihe nyocha nyocha.
Ogbugbu nke nchebe
Zere ịmịnye nri ma ọ bụ inhalation, ma zere ịkpọtụrụ anya na anụ ahụ. Biko chọọ nlekọta ahụike ozugbo. Ọ bụrụ na ị kuo ume, ọgbụgbọ nwere ike ịpụta. Wepụ onye ọrịa ahụ na ikuku ọhụrụ ozugbo ma chọọ nlekọta ahụike. Ọ bụrụ na ọ wụsara n'anya, jiri mmiri dị ọcha saa mmiri ozugbo maka 20min;
Nchekwa Nkwakọ ngwaahịa na ationgbọ njem
Ekwesiri imechi ya ma kpachara anya na oku.Pack in bag PP nke ejiri akpa Pee, 20kg, 25kg ma ọ bụ 50kg net ọ bụla. Ekwesịrị ịchekwa ya na ụlọ nkwakọba ihe ventilated. Mbukota kwesịrị ezu ma na-echebe site na mmiri na ìhè. A ga-echebe ya site na mmiri ozuzo na anwụ n'oge njem. Jiri nlezianya mee ihe mgbe ị na-ebudata na ibudata iji gbochie mmebi mbukota. Ọ bụrụ na ọkụ, ájá na ọtụtụ ọkụ ọkụ nwere ike iji gbanyụọ ọkụ.
Nke gara aga: Magnesium chloride
Osote: Soda Ash
Calcium Bromide mmiri mmiri, Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite De Sodium, Calcium Bromide Ngwọta, Hydrosulfite, Natrium Hydrosulfite,